JFK अस्वीकृत। पृष्ठभूमि मा उनको फिगर संग केहि पुस्तकहरु वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला, कालो उपन्यास
तिनीहरू बस कागजातहरू बिरोध गर्नुहोस् को हत्या को बारेमा जोन फिटजेरल्ड क्यानेडी, JFK। धेरै पुस्तकहरू सम्भवतः संयुक्त राज्यको इतिहासमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित राष्ट्रपतिको बारेमा लेखिएका छन्। हामी आज यो देख्छौं .० शीर्षक नायकको रूपमा वा पृष्ठभूमिमा, यी तीन जना प्रसिद्ध पत्रकारका नामहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको फिलिप शेनन र लेखकहरु स्टीफन कि and र जेम्स एलोरो। तीन दृष्टिकोणहरू, ऐतिहासिक र पत्रकारिता, विज्ञान कल्पना र पूर्ण कल्पना २० औं शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्रहरूको बारेमा।
1 JFK केस खोल्नुहोस् - फिलिप शेनन
2 ११/22/२11। - स्टीफन किंग
3 अमेरिकी त्रयी - जेम्स एलोरोइ
3.2 ग्रेट को छ छ
3.3 निरन्तर रगत
JFK केस खोलियो - फिलिप शेनन
फिलिप शेनन उहाँ एक अनुसन्धान पत्रकार हो को न्यु योर्क टाइम्स उनले १ 1981 2008१ पछि काम गरिसकेका वाशिंगटनमा। सन् २०० XNUMX को वसन्त oneतुमा उनको अखबार स्ट्यान्डमा एक दिन उसको फोनको घण्टी बज्यो। उहाँ एक महत्त्वपूर्ण वकिल हुनुहुन्थ्यो जो प्रख्यात सदस्य थिए वारेन आयोग जसले JFK को हत्याको अनुसन्धान गर्‍यो। त्यस व्यक्तिले उनलाई त्यो आयोगका सदस्यहरूलाई के थाहा थियो भनेर बताउन भन्यो जो अझै बाँचेका थिए।
यसैले पत्रकारले five बर्षको जागिर सुरु गरे लुकेका ईतिहास पुन: निर्माण गर्नुहोस् पछिल्ला शताब्दीको एक घटनाको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण र विवादास्पद अनुसन्धानबाट। तर यो पुस्तकको मतलब धेरै नै थियो। शेननले पत्ता लगाए कि केनेडीको हत्याको बारेमा धेरै सत्य भनेका थिएनन्, र धेरै प्रमाण लुकाइएको वा नष्ट गरिएको थियो CIA, FBI र वाशिंगटनका अन्य शक्तिशाली व्यक्तिहरू द्वारा।
बाट साक्षात्कार सयौं र वारेन आयोग र यी नायकहरूका बाँचेका सदस्यहरूको पहुँचमा, शेननले एक निर्माण गरे JFK को हत्या र अनुसन्धान असफलको लगभग निश्चित खाता। हामी त्यस्तै समयका पौराणिक व्यक्तिहरू पनि भेट्टाउँछौं जैकलिन क्यानेडी र रबर्ट क्यानेडी, जे। एडगर हूवर वा Lyndon B. Johnson।
22 / 11 / 63 - स्टीफन राजा
ऊ JFK संग कसरी हिम्मत गर्न सकेन आतंक को निर्विवाद मास्टर र प्रशस्त भन्दा बढी स्टीफन राजा? २०१२ मा मैले यस पुस्तकको कथाको साथ प्रकाशित गरेँ Jake epping, माइनको सानो शहरमा एक अंग्रेजी शिक्षक। एक दिन उसको एक वयस्क विद्यार्थी, ह्यारी डन्निंग, एक निबन्ध लेख्नुहोस् जुन तपाइँलाई असर गर्छ। प्रस्तावित विषय "दिनको जीवन परिवर्तन भएको थियो" र डन्निंगले के भन्यो रात उनको बुबाले मातेको घरमा पिए र आफ्नी आमा, भाइ र बहिनीलाई मार्न मारे। उसले आफूलाई बचाउन सफल भयो।
चाँडै पछि, जेकको साथी, अलले एउटा ठुलो गोप्य कुरा प्रकट गर्दछ: उसको रेस्टुराँको गोदाममा सन् १ 1958 XNUMX सम्म पुग्ने ढोका। अल जेकलाई भेट्न समयमै फिर्ता यात्रा गर्न अनुरोध गर्दछ मिशन, जुन त्यो हो, क्यानेडीको हत्या रोक्नुहोस्।
त्यसैले जेक १ 1958 XNUMX मा जान्छ एक नयाँ परिचयको साथ नयाँ जीवन शुरू गर्न र १ 1963 untilXNUMX सम्म पर्खनुहोस्। र यसले उनलाई सुन्दर पुस्तकालयको प्रेममा समय दिन दिनेछ। साडी डुनहिल, खोज्नुहोस् ली हार्वे ओस्वाल्ड र उनको विद्यार्थीको परिवार को लागी उनी त्रासदी बाट बच्न Harry Dunning। जेकलाई पनि थाहा छ कि उहाँ फर्कनुहुँदा केवल दुई मिनेट आफ्नो संसारमा पार हुनेछ। तर प्रश्न जान्नु हो के अन्य परिवर्तनहरू तपाइँको कार्यहरूलाई उक्साउनेछ र यदि तपाइँ सक्षम हुनुहुनेछ विगतमा पछाडि आफ्नो जीवनको महिला छोड्नुहोस्.
अमेरिकी त्रयी - जेम्स एलोरो
जैक केनेडी हाम्रो ईतिहासको खास रसदार पृष्ठको लागि पौराणिक आख्यान थिए। ऊसँग स्टाइलिश उच्चारण थियो र हेयरकट जस्तो अरू कोही थिएन। […] ज्याकलाई इष्टतम क्षणमा हत्या गरिएको थियो पवित्रता सुनिश्चित गर्न र झूटले आफ्नो अनन्त ज्वाला वरिपरि घुम्न जारी राख्छ। यो आफ्नो कलश भत्काउने र केहि पुरुषहरू जो पर्दा उठाउन योगदान पुर्‍याउने र आफ्नो पतन सुविधाजनक पर्दाफास गर्ने समय हो।
त्यो लेख्छ जेम्स ellroy को शुरुआत मा अमेरिकायसको पहिलो शीर्षक आवश्यक त्रयी सबैलाई त्यस समयमा रुचि सबैको लागि र यसका क्यारेक्टरहरूको सबै भन्दा उत्तम चित्र। को रबीड कुकुर, क्रुडेस्ट र सबैभन्दा हिंस्रक अपराध उपन्यासका मास्टर, कुनै पनि छुट बिना यो त्रयी लेखे। अवश्य पनि तपाईकोमा विशेष र अद्वितीय शैली प्रत्यक्ष, scathing, टेलिग्राफिक, हिंसात्मक र जटिल।
यस त्रयीमा वर्णन गरिएका घटनाहरू १ 1958 1972 मा शुरू हुन्छ र १ XNUMX XNUMX२ मा समाप्त हुन्छ। एलोरो फिक्शन मात्र प्रयोग गर्दछ तर वास्तवमा पनि ऐतिहासिक घटनाहरू र वास्तविक र काल्पनिक पात्रहरूको अप्रिय मिश्रण जसलाई उहाँ कुनै मतलब छैन। ऐतिहासिक र कालो उपन्यास मर्ज यो ठूलो काम मा, गाह्रो तर तीव्र र धेरै विचलित।
हामी भित्र छौ 1958 र हामीसँग छ नायकहरूका तिक्रोको साथ सामान्य कहानी कथात्मक संरचना. पीट बंधुर, ठूलो पीट, एक क्युबेक्युइस भूतपूर्व समुद्री, भ्रष्ट पुलिस, हावर्ड ह्युजका लागि चन्दा र मोब्स्टर मिकी कोहेनको लागि हत्यारा। सुरुचिपूर्ण केम्पर केट, FBI एजेन्ट, कलेजमा छोरीसँग कानून स्नातक। Y वार्ड जे। लिट्टेल, एक एफबीआई संचार विशेषज्ञ, एक छोरी, पूर्व-पत्नी, मदिरा समस्याहरू, र कायरतापूर्ण तर अधिक इमानदारको साथ।
यी तीनजना व्यक्तिहरूले Ellroy का ती वर्षहरूको अन्धकार पोर्ट्रेटमा आफ्नो जीवन पार गर्नेछन् राजनीतिक षडयन्त्र, पुलिस भ्रष्टाचार, क्युवाको स and्कट र जातीय द्वन्द्व JFK हत्या अघि दिन सम्म सबै बाटो।
ग्रेट को छ छ
यहाँ हामी छौं 1963 र नायक अझै छन् पीट बन्डुरन्ट र वार्ड जे। लिट्टेल। तिनीहरूसँग अर्को एफबीआई एजेन्ट देखा पर्छ, वेन टेड्रो जूनियरजो आफ्नो जेबमा $,००० डलर लिएर बलात्कार र हत्याको आरोप लगाउने कालो गेमर वेन्डेल डरफीलाई मार्न डल्लास आइपुगेको छ। अब काल्पनिक कथानक वास्तविकतासँग मिल्दछ जहाँ उनीहरू थिए बबी क्यानेडी वा मालकम एक्स। जातीय द्वन्द्व जारी छ र कू क्लक्स क्लान। थप रूपमा, हामी हिंड्यौं लास भेगास वा भियतनामas० को दशक देखि स्तब्ध पार्ने चित्र.
तेस्रो शीर्षक पहिले नै हामीलाई मा राख्छ 1968। मार्टिन लूथर कि and र रबर्ट क्यानेडीको मृत्यु भएको छ। र अब वेन टेड्रो जूनियर ऊ एक हेरोइन डिलर हो, उसले माफिया गेमि me् मक्का बनाउँदैछ, र ऊ आफ्नो विचारहरूमा क्रान्तिकारी हुँदैछ। उहाँसँगै तिनीहरू पार हुन्छन् डन क्रुस्फील्ड, एक निजी जासूस, र ड्वाइट होली, अर्को एजेन्ट र एक जे। एडगर हूवर ठग एक महिला, जोन रोजेन, जसलाई उनीहरूले बोलाउँथे रातो देवी र यो तिनैको उद्देश्य हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » JFK अस्वीकृत। पृष्ठभूमिमा आफ्नो फिगरको साथ केहि पुस्तकहरू